ကျမချစ်တဲ့ ကျမရဲ့ မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ချစ်မေမေ တယောက်
ဒီနေ့(၁၆၊မေလ၊၂၀၀၈)မနက် ၁ နာရီ ၄၀ မီနစ် မှာ ကျမတို့ကို
မော်စီ 16 May 2008 at 17:09
တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ မေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေ တစ်ပူပေါ်တစ်ပူဆင့်နေရောပေါ့။
မေအတွက်တော့ မြင့်မိုရ်တောင်ကြီးပြိုကျသွားပြီးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ လူဘ၀မှာ ဘယ်သူမဆိုကြုံတွေ့ရမယ့် သဘာဝတရားကြီးကို မေရဲ့ မားမားက‎ သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်သွားနိုင်ပြီးလေ။ မေ ဖြေသာနိုင်ပါစေလို့ ကျနော်ဆုတောင်းပါတယ်။ ဖြေသာနိုင်မယ်လို့လည်း ကျနော် ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မေက ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို သိထားနားလည်ထားလို့လေ။
Anonymous 16 May 2008 at 18:21
မမေ၊ လှုပ်ရှားနေတဲ့ကြားမှာ အခုလိုမျိုးနောက်ထပ် ၀မ်းနည်းစရာတွေထပ်ကြုံရပြန်ပြီအမရယ်။ =( ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ်။
Ashin Mettacara 16 May 2008 at 18:29
ညီမလေး မေ။ မားမားဆုံးတာသိရလို့ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်။ နိယာမတရားကို နားလည်ပြီး ညီမငယ်ဖြေသာပါစေ။
M.Y. 16 May 2008 at 19:53
ညီမ ရဲ့ မွေးသမိခင်အတွက် ၀မ်းနည်းစွာဖြင့်..
ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ် ဒီကနေ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..
လင်းထက် 16 May 2008 at 21:43
ညီမလေးရေ မပူဆွေးပါနဲ့လို့တားလို့ရစကောင်း တဲ့ အဖြစ်မဟုတ်လို့ တရားသိတဲ့ ညီမလေး တရားနဲ့သာဖြေပါလို့ပဲ အကိုပြောချင်ပါတယ် အကိုလဲ ညီမတို့နဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်း ပါတယ် ညီမရေ...။
လူသစ် 16 May 2008 at 21:54
BLACK DREAM 16 May 2008 at 23:38
အစ်မရယ်..တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ...။ သေခြင်းတရားဆိုတာ တကယ်တော့ မွေးရာပါ ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပါပဲ အစ်မရယ်...။
ညမီးအိမ် 16 May 2008 at 23:52
မမေကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကြားရတော့အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ လူဆိုတာသေမျိုးကြီးပဲဆိုပေမဲ့ တကယ်တန်းခွဲခွာရတဲ့အချိန်မှာ လူတိုင်းဝမ်းနည်းတတ်ကြပါတယ်။
ဖုန်း မြင်. 17 May 2008 at 00:19
ညီမလေး မိသားစုနဲ. ထပ်တူ...
ညီမမေမေ ဟာ ညီမလေး အတွက် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူနေမှာပါ။
ငို...ညီမရေ ...ဝအောင်သာ ငိုတော.။
ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း ခံစားရတာတွေ သိပ်များတယ် ကွယ် ......
အောင်သာငယ် 17 May 2008 at 02:11
ညီမလေးရေ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ်ကွယ်။ ကိုယ်တိုင် မိခင်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ဘယ်လို ခံစားရမယ်ဆိုတာ စာနာနားလည်ပါတယ်။
ညီမလေးလုပ်ခဲ့သမျှ ကုသိုလ်တွေအတွက် အမေ ကျေနပ်သွားမှာပါ။ အမေကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ။
ကိုရင်ညိန်း 17 May 2008 at 05:01
ထပ်တူကြေကွဲကြောင်း ပြောပါရစေ ...
ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ အစ်မ မေမေ ကောင်းရာ သုဂတိရောက်ပါစေဗျာ...
Anonymous 17 May 2008 at 11:28
မမေ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုမို့အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းမပေးတော့ပါဘူးး တရားနဲ့ဖြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် မေက စိတ်ဓာတ်ကြုံခိုင်းင်္ပြီးသားပဲ ယုံကြည်နေပါတယ် အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ ။
HEARTMUSEUM 18 May 2008 at 06:05
မမေရေ...အဖြေကို ကြိုသိနေပေမယ့် ကြားရပြန်တော့ ရင်ထဲမချိဘူးဗျာ။ စိတ်ထိန်းနိူင်ပါစေ။ ကုသိုလ်တွေ တိုးလုပ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်တာပေါ့ဗျာ.......
ရွှေပြည်သူ 19 May 2008 at 21:37
မေရေ... ကြိုသိထားပေမယ့် အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ အခုတလော blog တွေ မလည်ဖြစ်တာကြာလို့ အခုမှ မေတင်ထားတာ တွေ့တာ။ မေလုပ်ထားသမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ အတွက်ရော မေ့လိုမွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သမီးမျိုးအတွက်ပါ မေ့မာမားလည်း ကျေနပ်သွားမှာပါ။ ဒီလို စိတ်သောကတွေကြားက ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်လည်း အရှိန်မပျက် ကူညီနေနိုင်လို့လည်း မေ့ကို အရမ်းချီးကျူးမိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...
putoo 24 May 2008 at 14:01
အမေကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ။တရားနဲ့ဖြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
lotto 649 results 31 May 2008 at 10:55